Liechtenstein တွင် AG ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း - Liechtenstein ရှိရှယ်ယာများကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ
သင်သည် Liechtenstein တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းလီဟင်တိန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Liechtenstein ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ကျနော်တို့ Liechtenstein အတွက်သာ။ ကောင်း၏စျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်
ပြုလုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာသည် Liechtenstein နှင့် Liechtenstein နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ တို့အတွက် Clients သို့အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein တွင်ရှိသောကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein မှကမ်းလွန်တည်နေရာနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
Liechtenstein တွင်လိုအပ်သောသင်၏ကုမ္ပဏီတွင် Liechtenstein တွင်ဘဏ်အကောင့်ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
Liechtenstein ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပို့ခြင်း။
Liechtenstein နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖြေများနှင့်အတူ Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein အတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ Liechtenstein အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Liechtenstein အတွက် Virtual နံပါတ်၊ Liechtenstein အတွက် CRM Solutions၊ Liechtenstein အတွက် virtual office၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏ Liechtenstein AG အမည်ကိုရယူပါ။
သင်၏ Liechtenstein AG အမည်ကိုရှာပါ
နိဒါန်း Liechtenstein ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းမှု
၎င်းသည်ဥရောပ၏အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မြို့တော် Vaduz ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ၏အရှေ့ပိုင်း ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်ခက်ခဲသောအောက်ပိုင်းဒေသများမှဖွဲ့စည်းထားသည့် Rhatikon တောင်တန်းများဖြစ်ပြီး focal Alps ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အထင်ရှားဆုံးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်သော Grauspitz သည် ၈,၅၂၇ ပေ (၂,၅၉၉ မီတာ) အထိမြင့်တက်ပြီးနယ်မြေ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုသည်ပေ ၆၀၀၀ ကျော် (မီတာ ၁၈၀၀) မြင့်တက်နေသည်။ တောင်တန်းများကိုအောက်ခြေစိမ်းလန်းစိုပြေသောသစ်တောများနှင့်မြင့်မားသောအပွင့်များဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ တောင်များတွင်သိသာထင်ရှားသောချိုင့်ဝှမ်းသုံးခုရှိသည်။ နယ်မြေ၏အနောက်ဘက်အပိုင်းသည်အီလင်းမြစ်၏ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်အတူမြောက်ဘက်သို့ပျံ့နှံ့သွားသောသုံးဘက်မြင်သောရွှံ့နွံပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သောရိုင်းမြစ်ရေကြီးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေလမ်းကြောင်းချိုင့်ဝှမ်းသည်တစ်ချိန်ကကံကောင်းခဲ့သော်လည်း ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက်။ စီးဆင်းနေသောရေချိုမြေသည်၎င်း၏စီးပွားရေးကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာများကိုလယ်ယာစီးပွားအတွက်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စေသည်။
Liechtenstein သည်ဥရောပနိုင်ငံများအကြားတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောကန့်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဥရောပ၌တည်ငြိမ်ဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည် - အဆင့်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ဘဏ္dependာရေးမှီခိုအားထားမှုကြောင့်သုံးဆခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုအတော်အတန်ကြာမြင့်စွာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဤသုံးဆ - အကဲဖြတ်သုံးသပ်မှုများသည်တည်ငြိမ်သောစီးပွားရေးနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည်လီချန်တိန်း၌ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိခြင်းများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Liechtenstein ၏ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အခွန်ကောက်ခံမှုမူဘောင်သည်မရင်းနှီးသောစျေးကစားသူများအားဆွဲဆောင်သောအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြီးမားဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကဲဖြတ်မှုနှုန်းသည် ၂၀% နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုစီစဉ်ခြင်းများဖြင့် Liechtenstein သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘဏ္specialistsာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအားအမျိုးမျိုးသောအားသာချက်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Liechtenstein ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်သည် ၁၂.၅% ရှိခဲ့ပြီးဥရောပတွင်အနိမ့်ဆုံးနှုန်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Liechtenstein အတွက်ရိုးရှင်းသောအဖွဲ့အစည်းကိုစစ်မှုထမ်းအစီအမံများစွာသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဘဏ္financialာရေးအထူးကုများမှေးမှိန်။ Liechtenstein ၌, အဖွဲ့အစည်းဖျူးတိုင်းတာသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးသင်အများပြည်သူဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားသင်၏အဆိုပြုထားသောစီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးယူရို ၃၀,၀၀၀ ကိုကန့်သတ်ထားသောအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပေးသင့်သည်။ သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည်အလုပ်လုပ်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းစုစည်းနိုင်သည်။
Liechtenstein သည်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ (EEA) အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ EEA သည်ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) နိုင်ငံများနှင့်အိုက်စလန်၊ Liechtenstein နှင့်နော်ဝေးကဲ့သို့ပေါင်းစည်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် Liechtenstein သည် EU ၏တစ်ခုတည်းသောစျေးကွက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည် Liechtenstein မှတစ်ဆင့်ကြီးမားသော EU စျေးကွက်ကိုထိုးနှက်နိုင်သည်။
Liechtenstein သည်အာမခံအေဂျင်စီများနှင့်ထင်ကြေးများသိုလှောင်ထားသည့်နေရာများတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံများကြားတွင်ရှိသည်။ Liechtenstein သည် EU ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိသော်လည်းအီးယူနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုမှတ်သားထားသည်။ အီးယူနိုင်ငံများမှဘဏ္specialistsာရေးကျွမ်းကျင်သူများအား Liechtenstein ရှိစွန့်စားရန်ပုံငွေorganizationsရိယာတွင်အဖွဲ့အစည်းများထူထောင်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်
Liechtenstein သည်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများသည် Liechtenstein ၏စီးပွားရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ အကြမ်းအားဖြင့်လုပ်သားအင်အား၏ ၄၀% ကိုခေတ်မီဒေသတွင်အသုံးပြုသည်။ နိုင်ငံ၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုး၏ ၄၀% နီးပါးကိုထုတ်လုပ်သည့်စုဝေးသည့်နေရာနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။
•စျေးကွက်နှစ်ခုသို့သွားရန် Springboard (ဥပမာဥရောပနှင့်ဆွစ်ဇာလန်)
• Liberal Corporate Law
• AAA ခရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Liechtenstein သည်ထူးခြားသည့်ထင်မြင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အီးယူ၏စျေးကွက်များကိုသင်ရိုက်နှက်နေခြင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူလျှင်၊ Liechtenstein သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစပြုနိုင်သည်။
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက် Liechtenstein၊ Liechtenstein ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Liechtenstein တွင်စီးပွားရေးစတင်ခြင်းနှင့် Liechtenstein သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင်စတင်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
Liechtenstein ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ရန်နှင့်၊ သင်၏လစ်လပ်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို Liechtenstein တွင်ငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ Liechtenstein ရှိ virtual office ။ Liechtenstein တွင်လုပ်ငန်းဝယ်ယူခြင်း၊ virtual နံပါတ် Liechtenstein၊ Liechtenstein တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ Liechtenstein ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Liechtenstein ရှိဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Liechtenstein ရှိစီးပွားရေးတန်ဖိုး၊ Liechtenstein ရှိ CRM Solutions၊ Liechtenstein တွင်ကုန်သည်အကောင့်၊ ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်လိုက်နာမှု, Liechtenstein အတွက် Web ကိုတီထွင်မှုများကဲ့သို့ Liechtenstein အတွက်အိုင်တီဖြေရှင်းချက်, Liechtenstein အတွက် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Liechtenstein အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Liechtenstein အတွက်အပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Liechtenstein အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Liechtenstein အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး တတ်နိုင်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများ t ။
Liechtenstein တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Liechtenstein နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Liechtenstein မှ offshore bank account အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ၀ န်ထမ်းများအား Liechtenstein တွင်ဖြည့်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ Liechtenstein ရှိစီးပွားရေးအရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ Liechtenstein ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein ရှိ virtual နံပါတ်များ၊ Liechtenstein တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ Liechtenstein ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Liechtenstein ရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ Liechtenstein ဘဏ္financialာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Liechtenstein ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway Liechtenstein တွင်၊ Liechtenstein မှပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် Liechtenstein တွင်အလုပ်လုပ်နေသောအရင်းအနှီးရန်ပုံငွေ၊ Liechtenstein တွင်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှု၊ Liechtenstein ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ Liechtenstein ရှိ Web development၊ Liechtenstein ရှိ ECCommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများကိုဖော်ပြရန်အတွက် Liechtenstein တွင် Liechtenstein ရှိ software development နှင့် Liechtenstein ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
Liechtenstein ရှိ AG အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
Liechtenstein အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Liechtenstein အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာလီချန်တိန်းနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးကိုပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးပမာဏအတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein ၌အကောင်းဆုံးသောစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Liechtenstein ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Liechtenstein ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း လီချင်စတိန်း (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လီချင်စတိန်း (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း လီချင်စတိန်း
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လီချင်စတိန်း
Liechtenstein Business Company အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account Liechtenstein
Liechtenstein BUSINESS COMPANY အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
Liechtenstein ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်း။ Liechtenstein
Liechtenstein ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Liechtenstein စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal Liechtenstein
Liechtenstein ရှိ AG အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● AG Liechtenstein အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကြေး (ပထမနှစ်) - $ ၅၅၀၀
●လီchtensteinတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၄၄၉၉
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြုပြီး Liechtenstein ရှိ Company TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
● AG အတွက် Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●လီchtensteinရှိ AG အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ရမည်
●လီchtensteinရှိ AG အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးရမည်
●လီဟင်တိန်းရှိ AG အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ခန့်တာဝန်ပေးခြင်း
●လီဂင်စတိန်းတွင်သင်၏ AG အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
Liechtenstein တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အတွက်လည်းအခမဲ့အကြံဥာဏ်များပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Liechtenstein သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
AG Liechtenstein အတွက်ကုန်သည်အကောင့်
Liechtenstein ရှိ AG ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်
AG Liechtenstein အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
AG အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
AG Liechtenstein အတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောအစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
AG အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Liechtenstein ၌ Million Makers မှတဆင့်
အကယ်၍ သင်သည် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Liechtenstein ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ Liechtenstein ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များသည် Liechtenstein ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Liechtenstein ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ Liechtenstein ၌ရှိသောဖောက်သည်များနှင့် Liechtenstein အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်သင်သည် Liechtenstein ၌ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်၊ ငါတို့မှတစ်ဆင့်လီဟင်တနင်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကို Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါပြီ။ သင်လျှောက်ထားလိုပါက Liechtenstein အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သောသင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက် Liechtenstein အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင့်အားပေးနိုင်ပါသည်။ အဘို့ Liechtenstein နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Liechtenstein ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
Lie Liechtenstein အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
Lie Liechtenstein အတွက်နေထိုင်ခွင့်
Lie Liechtenstein အတွက်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
Lie Liechtenstein အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ လီချင်စတိန်း ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် လီချင်စတိန်း.
Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိများသည်အရာအားလုံးကိုလီဟတ်စတိန်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein ၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့် Liechtenstein ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်အတူသင့်အားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အရေးပါမှုကို ပေး၍ Liechtenstein တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။
Liechtenstein တွင် AG အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု - လီchtensteinတွင်ရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ
လီကျူးစတိန်းအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သည်။ လီချန်တိန်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Liechtenstein ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Liechtenstein ရှိ AG အတွက် Liechtenstein တွင်ရှယ်ယာများကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
Liechtenstein တွင်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
Liechtenstein ရှိ AG အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာများနှင့် Liechtenstein ရှိရှယ်ယာများကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ။
Liechtenstein ရှိ AG အတွက်လီကတ်တိန်းတွင်ရှယ်ယာများဖြင့်အကန့်အသတ် ရှိ၍ ရှယ်ယာများကန့်သတ်ထားသည်။
Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော AG အတွက်လီကတ်တိန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအစုရှယ်ယာဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသော AG အတွက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ Liechtenstein ရှိ AG ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ပါက Liechtenstein ရှိရှယ်ယာများကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက၊ Liechtenstein ရှိ AG၊ လီလင်တိန်းတွင်ရှယ်ယာများကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ။
Liechtenstein တွင်အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်ထားသော Liechtenstein / ကုမ္ပဏီတွင် AG မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Liechtenstein ရှိ AG / Liechtenstein ရှိအစုရှယ်ယာဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ -
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည် Liechtenstein တွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိပဲလုပ်ဆောင်မှုများကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည်ဆိုပါကလီယန်စတိန်း၌ဘဏ်လီမိတက်တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သင်လိုင်စင်မရသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ထီပေါက်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းတွင်ကုန်သွယ်ခြင်း / အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ လီချန်စတိန်းတွင်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လီချန်တစတန်ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ Liechtenstein ၌လဲလှယ်ခြင်း၊
Liechtenstein ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားမှုအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Liechtenstein နှင့် "United States of United States 109 နိုင်ငံအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများသည် Liechtenstein တွင်တိုက်ရိုက်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလက်တွဲမှုနှင့် Liechtenstein ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein ရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အလွန်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လီဟင်တိန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လီချန်တိန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လီချန်တိန်းနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ နိုင်ငံတို့ဟုခေါ်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။
Liechtenstein ရှိ Corporate Services | Vaduz ရှိ Corporate Services | Schaan အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Liechtenstein ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ၊ Liechtenstein ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Liechtenstein တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Liechtenstein ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ Liechtenstein ရှိ Offchore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Liechtenstein ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်, Liechtenstein ရှိ Offshore Company မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Liechtenstein ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Liechtenstein ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ
Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Vaduz ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Schaan အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
Liechtenstein နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုဝန်ဆောင်မှုများ
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Liechtenstein တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီလီချန်တိန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် လီချင်စတိန်း.
Liechtenstein ရှိအကောင့်များ Outsourcing
သင်၏အရင်းအနှီးသည်လီဟင်တီစတိန်းတွင်စာရင်းသွင်းပြီးဖြစ်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို Liechtenstein ၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ခြင်းဖြင့်။
HR အတိုင်ပင်ခံ Liechtenstein တွင်ထောက်ပံ့မှုသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် Liechtenstein တွင်လူသစ်စုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Liechtenstein ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့်လည်းလူသိများ Liechtenstein နှင့်အမေရိကန်အပါအဝင် 107 နိုင်ငံများ, "အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း"Liechtenstein ၌တည်၏
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ လီချင်စတိန်း.
Liechtenstein ရှိ cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် Liechtenstein မှ offshore သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွက်။
Liechtenstein ရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Liechtenstein ရှိအခြားဖောက်သည်များအပါအ ၀ င်သင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Liechtenstein အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Liechtenstein ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင် Liechtenstein ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ၊ Liechtenstein ရှိလူနေထိုင်မှု VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်ထားမှု ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံရှိလီလင်တန်မှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း လီချင်စတိန်း Liechtenstein တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Liechtenstein ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လီချင်စတိန်း, Liechtenstein ရှိ CryptoCurrency Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Liechtenstein ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
Liechtenstein ရှိစျေးသက်သာသောဆော့ဝဲလ်များထုတ်လုပ်ခြင်း Liechtenstein ရှိစျေးသက်သာသောစီးပွားကူးသန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးကြီးမားမားကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများအားလီခတ်စတိန်းတွင်ထောက်ခံမှုရှာဖွေရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်လီဟင်တိန်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များအလျင်အမြန်လိုက်နာရန်လျင်မြန်စွာလိုက်နာသူများ Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအဘယ်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီမည့်အရာများအနက်ရိုးသားစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကသူတို့ကုမ္ပဏီကိုလီချန်စတိန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Liechtenstein တွင် AG ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုလီchtensteinတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း AG၊ Liechtenstein တွင် AG ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein တွင် Offshore AG ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein တွင် Offshore AG မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein တွင် Offshore AG မှတ်ပုံတင်ခြင်း , Liechtenstein AG ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein AG မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein AG ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ Liechtenstein ကမ်းလွန် AG ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein ကမ်းလွန် AG မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Liechtenstein တွင် AG ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု | Liechtenstein တွင်ရှယ်ယာထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Liechtenstein တွင်ရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ရှယ်ယာအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်သည်။ Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein တွင်အစုရှယ်ယာပါဝင်ခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ၊ Liechtenstein, Offshore တွင်ရှယ်ယာများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ။ ရှယ်ယာများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီလီဟင်တိန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီဟင်တိန်းတွင်ရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ လီဟင်တိန်းရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ Liechtenstein ကုမ္ပဏီမှအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ။
Liechtenstein တွင် AG ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ Liechtenstein တွင်ရှယ်ယာများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
လီချန်တစိန်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအားလီကတ်စတိန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လီချန်စတိန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကုမ္ပဏီများအားလီကစ်တစတန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လီဟတ်စတိန်းမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Liechtenstein တွင်ထောက်ခံမှုများမှာ - Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Vaduz တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vaduz မှ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Vaduz မှ Offshore ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vaduz မှ Offshore ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Schaan ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Schaan တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Schaan မှ Offshore ကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခြင်း၊ Schaan မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Schaan မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Liechtenstein တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Vaduz တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Schaan အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလီချန်တိန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ လီဟတ်စတိန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များ၊ Vaduz ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ Vaduz ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Vaduz ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Vaduz ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Vaduz ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Schaan ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Schaan ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ, Schaan ရှိ Schaan ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ Schaan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Schaan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Liechtenstein တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Vaduz တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Schaan တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ
Liechtenstein ရှိတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်မှာလီချန်တိန်းတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းလီချန်စတိန်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လီချန်တစိန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လီကတ်စတိန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ Vaduz မှ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Vaduz ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Vaduz ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Vaduz ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Vaduz ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Schaan ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Schaan ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Schaan တွင်ရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Schaan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Schaan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
Liechtenstein တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Vaduz တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Schaan တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Liechtenstein တွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Vaduz တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ Vaduz တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ၊ Vaduz တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပါ။ Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်ထောက်ပံ့သောမြို့ကြီးများ၊ Schaan တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည်။ Schaan တွင်တည်ထောင်သော Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း။
Liechtenstein တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Vaduz တွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Schaan အတွက်တန်ဖိုးနည်းကုမ္မဏီပေါင်းစပ်ခြင်းန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌လည်းဘဏ်စာရင်း၊ Vaduz တွင်နေထိုင်သူများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ Vaduz တွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Vaduz တွင်မှတ်ပုံတင်၊ Schaan တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Schaan ရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Schaan တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Liechtenstein | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Vaduz | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Schaan
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေ Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျမှု၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီသည် Liechtenstein တွင်ကုန်ကျသည်။
Liechtenstein ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Vaduz | Schaan ရှိစျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
Liechtenstein တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်သို့မဟုတ် Liechtenstein တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Liechtenstein တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက် Liechtenstein တွင်ပြည့်မီရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Liechtenstein တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Vaduz တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Schaan တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်း
Liechtenstein တွင် AG မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား လီဟင်တိန်းတွင်ရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ကန့်သတ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Liechtenstein AG ဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်ပါ။ Offchore AG တွင် Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ AG သည် Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ AG တွင် Liechtenstein တွင် AG ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Liechtenstein AG မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Liechtenstein Offshore AG ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ , Liechtenstein တွင် Offshore AG ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ Liechtenstein AG တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ Liechtenstein တွင် AG ပါဝင်ခြင်းနှင့် Liechtenstein နှင့်အစုရှယ်ယာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့် Liechtenstein ကုမ္ပဏီနှင့်အတူနေထိုင်သူမဟုတ်သူများ၊ Liechtenstein ရှိအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ၊ Liechtenstein, Liechtenstein တွင်ရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်, Liechtenstein ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာများကန့်သတ်, လီchtensteinကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ကန့်သတ်, ရှယ်ယာအားဖြင့်ကန့်သတ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ, ဖွဲ့စည်း, ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီကန့်သတ် Liechtenstein တွင်ရှယ်ယာများထည့်သွင်းခြင်း၊ Liechtenstein ရှိရှယ်ယာများထည့်သွင်းခြင်း၊
Liechtenstein တွင် AG ကိုထည့်သွင်းပါ Liechtenstein တွင်ရှယ်ယာများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြားမည်သို့ခြားနားသနည်း။
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိဟုသုံးစွဲသူများကမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ပါဝင်သောကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
Liechtenstein ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ Liechtenstein ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Liechtenstein ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်လီဟင်တိန်း၌သင်၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို (သို့) Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုကိုလည်းမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြောက်အများနှင့်အမြောက်အမြားနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များဟုလူသိများသောလီကျူးသိန်းစ်၌အရည်အသွေးကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကြောင့်၊ Liechtenstein နှင့် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အား Liechtenstein ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်သူများနှင့် Liechtenstein ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Liechtenstein တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများနှင့် Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Schaan တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လိုလျှင်သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိသည်။
Liechtenstein တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Liechtenstein ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။
ဒီနေ့ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Liechtenstein ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ သို့မဟုတ် Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဖွင့်ရန်၊ Liechtenstein တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အလားတူပင် Liechtenstein တွင်လည်း Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Vaduz တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Vaduz တွင်တည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Vaduz တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Schaan တွင်တည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် Schaan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
Liechtenstein တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Vaduz တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Schaan အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်န်ဆောင်မှု
Fürstenhaus LiechtensteinLiechtenstein - ပရင့်စ်၏အိမ်
Fürstentum Liechtenstein- Liechtenstein ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။
Liechtensteinischer Landtag-Liechtenstein ရဲ့ပါလီမန်။
၀ န်ကြီးချုပ် Adrian Hasler (FBP)
ဒုတိယ ၀ န်ကြီးချုပ် Daniel Risch (VU)
၀ န်ကြီး Mauro Pedrazzini (FBP)
Liechtenstein ၏သံတမန်ဆိုင်ရာတာဝန်များ- ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Liechtenstein ၏သံတမန်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း။
ကိန်းဂဏန်းများအတွက် Liechtenstein- Liechtenstein ၏အချက်အလက်များ။
Liechtensteinischer Bankenverband-Liechtenstein ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း။
Liechtenstein - ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွား Gu ည့်လမ်းညွှန်များ
Kunstraum Engländerbau Postmuseum နှင့်အတူ
LIFE ရာသီဥတုဖောင်ဒေးရှင်း Liechtenstein
Umcheltschutz မှ Liechtensteinische Gesellschaft
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - Liechtenstein
ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ် - Liechtenstein
Kaiser Partner Privatbank AG က
Liechtenstein AG ရှိ LGT ဘဏ်
ဘဏ် Frick & Co. , AG က
ဘဏ် Vontobel (Liechtenstein) AG
EFG ဘဏ်မှ Ernst AG
Verwaltungs- und Privat-Bank AG မှ
Volksbank AG က
Raiffeisen ပုဂ္ဂလိကဘဏ် Liechtenstein
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်လီဟင်တိန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုများမှငွေကြေးခ ၀ ါချမှုကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဤကဲ့သို့သော Clients များအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ လီချင်စတိန်း အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
● Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
● Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) Liechtenstein မှသို့မဟုတ်သို့ (သို့) သွားသောစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊
● Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဖြစ်စေ၊
● Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Liechtenstein တွင်သို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သီးသန့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်သီးသန့်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဓာတုပစ္စည်းများကို Liechtenstein ရှိသို့မဟုတ်မှ Liechtenstein မှသို့မဟုတ်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများအားစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများမှပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
● Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူ၊ တိရိစ္ဆာန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် Liechtenstein ရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့ Liechtenstein မှပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ခွင့်မပြုပါ။
●အစားထိုးမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) Liechtenstein တွင် (သို့) မှသို့တည်းမဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်၊
●လီchtensteinအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဘာသာရေးဂိုဏ်းများနှင့် ၄ င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို Liechtenstein မှသို့မဟုတ်သို့သွားသောနေရာများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
● Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●လီchtensteinအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Pyramid အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် Liechtenstein မှသို့မဟုတ်မှသို့မသွားပါ။
● Liechtenstein အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လီချ်တိန်းစ်တွင်ရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့တည်းမဟုတ် Liechtenstein တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် လီချင်စတိန်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် လီချင်စတိန်း, လီချင်စတိန်း ဘဏ်အကောင့်, လီချင်စတိန်း ယုံကြည်မှု လီချင်စတိန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု လီချင်စတိန်း။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ Liechtenstein သည်
အခမဲ့တိုင်ပင်တောင်းဆိုခြင်း Liechtenstein သည်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-liechtenstein-ag/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-liechtenstein-ag/ မှသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-liechtenstein-ag/